विचार – Page2– News Dainik
कोरोना महामारीपछि नेपालको पर्यटन उद्योग कस्तो हुने ?
४ बैशाख २०७७, बिहीबार १२:५४ लेख, विचार
मानव सभ्यताको उदयसँगै थुप्रै महामारी र दुर्घटना यसभन्दा अघि पनि विश्वले झेल्दै नआएको होइन । तर पटक देखिएको कोरोनाको महामारी मानव कल्पना र सोच भन्दा अकल्पनीय र भयानक भएर आएको छ । विगतमा यस्ता रोगको महामारीमा मानविय क्षति हुनुमा औषधि विज्ञानको आविष्कार भइनसकेको कारण प्रमुख रहेको थियो । तत्कालिन विश्व यती सानो र द्रुतगतिमा जोडिएको पनि थिएन तर आजको अवस्था नितान्त भिन्न छ । तत्कालिन सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विश्वसँग …
राजनीतिक अस्तित्वमा युवा : संकटमा सामाजिक उत्तरदायित्व
१ बैशाख २०७७, सोमबार १२:०५ लेख, विचार
गोविन्द बीसी । वास्तवमा मानव जीवनको सबैभन्दा उर्जाशील, गतिशील र सामर्थ्यवान उमेर भनेको युवा अवस्थाको नै हो । प्रत्येक युवामा केही गर्ने एउटा सुन्दर सपना हुन्छ, एउटा विशाल आकांक्षा हुन्छ, अनि काम गर्ने तीव्र इच्छाशक्ति हुन्छ । हरेक संकटको घडीमा युवाशक्तिको सहयोग अपरिहार्य र अनिवार्य छ । १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाशक्तिले गरेको सहयोग र योगदान हरेक सामाजिक र राजनीतिक कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा भएका ठूला राजनीतिक …
[विचार] दाई सन्चै !
३० चैत्र २०७६, आईतवार १४:०१ लेख, विचार
डम्मर बम एउटा प्रसंगगबाट शुरु गरौ राजधानीको एक क्याम्पसमा सुूुरपश्चिमको एउटा विशेष कार्यक्रम त्यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी पूर्वमन्त्री । जो नेपाली काँग्रेसका नेता । कार्यक्रम सुदूपश्चिमको साझा सवालका विषयमा । सबै दलका सुप विद्यार्थी नेताहरु सहभागिता । बढीमात्रामा नेपाल विधार्थी संघको उपस्थिती । केही विधार्थीहरु क्याम्पस प्रांगणमा । गुटको नेता नभएर कार्यक्रमका जान नमिल्ने रे । राजधानीकै अर्को कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका कम्पनी अनुसार भेला । पार्टीमा गुट र गुटमा पनि …
[विचार] बा केहि बोल्नु न !
२८ चैत्र २०७६, शुक्रबार १२:२७ लेख, विचार
डम्मर बम । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीतिलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ भन्ने यो महावाणी तपाईको होइन र बा (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) । बा आज तपाईको वाणीलाई नै खुलेआम लत्याईदै छ । बिच बजारमा चिरहरण हुदैछ । तर्पाइले त भ्रष्टाचारीको अनुहारसम्म पनि हेर्दिन भन्नु पनि भा थियो । कसैलाई छोडिदैन पनि भन्नु भा थियो । तपाईको भाषण अनुसारको शासन हुन्छ, भन्नेमा नेपाली जनता ढुक्क थिए । तर किन बा बीच बजारमा …
विचार : केन्द्र भर्सेज प्रदेश सरकार
२५ चैत्र २०७६, मंगलवार २०:४७ लेख, विचार
डम्मर बम कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत १९ संयुक्त राज्य अमेरिका र २० गते अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो । सम्बन्धित देशका राजदुतसँगको कुराकानीमा उहाँले नेपालीहरुको अवस्थावारे चासो व्यक्त गर्नुभयो । यो राम्रो पक्ष हो, आफ्ना जनताको अवस्था वारे चिन्ता व्यक्त गर्नु राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी हो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यूएईमा रहेका नेपाली कामदारका सन्दर्भमा त्यहाँका युवराजसँग चासो व्यक्त गर्नुभयो । डिसेम्बर अन्तिम …
२२ चैत्र २०७६, शनिबार १८:३० लेख, विचार
डम्मर बम । हालसम्म नेपालमा नौ जनामा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याकं अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा थप तीन जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) पोजेटिभ देखिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या नौ पुगेको हो । एक जना स्थानीयमा कोरोना भाइसरको पुष्टि भई समेत कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले भने स्थानीयलाई भेला नै गरी राहत वितरण गरिएकोे छ । लम्कीचुहा नगरपालिका र अन्य सामाजिक संघ संस्थाहरु राहतका नाममा मानव स्वास्थ्य …
श्रम शोषण रोक्न कतारलाई एमनेष्टी इन्टरनेशनलको आग्रह
३ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०९:४३ विचार
काठमाडौं । एमनेष्टी इन्टरनेशनलले कतारमा आप्रवासी कामदारमाथि गलत व्यवहार निरन्तर जारी रहेको आरोप लगाएको छ । सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको कतारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खटिएका आप्रवासी कामदारहरुसँग निरन्तर रुपमा गलत व्यवहार जारी राखेको एमनेष्टीको ठहर छ । एमनेष्टीको प्रतिवेदन अनुसार कतारमा सयौं कामदारले बिना तलब काम गरिरहेका छन् । कामदारहरुको हितका लागि सघाउन भनेर स्थापना गरिएका नयाँ संयन्त्रले समेत उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको उक्त …
नाङ्गो शरीरमा कुनै सौन्दर्य रहँदैन
१६ असार २०७६, सोमबार १७:५० विचार
जंगली युगमा मान्छे नाङ्गै बस्थे । पशुवत चेतना र जीवन थियो मान्छेको । आजजस्तो सामाजिक नियम, कानुन, मर्यादा, ढोंग, बन्धन केही थिएन । साँच्चै निर्बन्ध थियो मान्छे । पशु जस्तै । विश्वबन्धुत्वको भाव र मानवतावाद क्षीण हुँदै गइरहेको छ । सामाजिक सीमा र मर्यादा उलंघन हुने क्रम बढ्दो छ । संस्कृतिको नाममा विकृति मौलाउँदो छ । मान्छेले आफूलाई सामाजिक प्राणीको रूपमा भन्दा केवल एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा जीउनमा आनान्दानुभूति गर्न …
‘राजनीति दुर्गन्धित भयो, अब सक्षम युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ’
२० चैत्र २०७५, बुधबार १७:३० विचार
विवेक लामा घिसिङ्ग । मार्टिन लुथर किङ जुनियरले भनेका छन्- सच्चा नेताले सहमतिको खोजी गर्दैन, बरु आफैं सहमतिको साँचो बन्छ । त्यसैगरी म्याक्सवेल भन्छन्- जसलाई बाटो थाहा छ, जो त्यही बाटोमा हिंड्छ र बाटो पनि देखाउँछ त्यही नै नेता हो । हामी हरदिन गुनासो गरिरहन्छौं यो देश नेताहरूले बिगारे । गतिला नेता कोही भएनन् । यसले चाहिँ केही गर्ला कि भनेको यो पनि उही ड्याङको मुला निस्कियो । हामीले धेरै …
४ फाल्गुन २०७५, शनिबार १६:३५ लेख, विचार
डम्मर बम । नेपाली एउटा गीत छ माया बैगुनी नभई नहुनी भन्ने गीत जस्तै नेपाल विद्यार्थी संघ हो नेपाली काँग्रेसका लागि, यो काँग्रेसको नेता उत्पादन गर्ने नर्सरी मात्र नभएर प्रत्येक कुराको सारथी पनि हो । केवल विधार्थी केन्द्रीत हुनुपर्ने यो संगठनमा पार्टीनेता हावि हुन थाले पछि गुठबन्दीरहीत बन्न सकेन र सक्दैपनि । आफु अनुकुल भए ठिक नत्र आलोचना गर्ने राजनीतिक परम्परा हो । यसअघिका नेवि संघ अध्यक्षको कार्यकालका विषयमा थोरै …
3 पृष्ठ मध्येकॊ पृष्ठ नं 2«123 »